Nagu saabsan - Tianjin Runya Science Technology Development Co., Ltd.
Tianjin Runya Science Technology Development Co., Ltd., oo la aasaasay 2003, waxay ku taal Aagga Horumarinta Wuqing, Tianjin, Shiinaha. Wuqing waa saldhig soo -saar dhaqameed ubaxyo macmal ah. Laga soo bilaabo boqortooyadii Qing, ubaxa macmalka ah ee Wuqing waxaa loo doortay abaalmarin loogu talagalay Qasriga Boqortooyada.
Tianjin Runya Science Technology Development Co., Ltd. waxay ku takhasustay horumarinta, soo saaridda iyo suuqgeynta sahayda guriga, sida ubaxa macmalka ah, cawska macmalka ah, ubaxyada iyo dhirta la qalajiyey, qurxinta kirismaska, qurxinta guriga iwm. Diiradeena mar walba waxay ku jirtaa qurxinta meelahaaga. Alaabooyinkayagu waxay ku raaxaysanayaan sumcad wanaagsan suuqyada adduunka oo dhan, sida Yurub, USA iyo Aasiya. Xarumaheena waxaa ka mid ah warshad casri ah oo si fiican loo qalabeeyay, taasoo fulisa habab hufan oo la isku halleyn karo. Waxaan leenahay naqshadeeyayaal, kuwaas oo hubiya in shirkadeenu leedahay awoodo xooggan xagga farsamada iyo hal -abuurka. Waxaan naqshadeyn karnaa oo soo saari karnaa badeecadaha sida aad doorbidayso. Fadlan ku naso hubinta alaabtayada tayo sare leh iyo adeegyada xirfadeed.
Laga soo bilaabo sanadkii 2005, waxaan bilownay inaan ka soo qeyb galno carwada Canton oo leh ubaxyo macmal ah iyo qurxinta guryaha kale. Tayadeenna wanaagsan iyo adeeggeenna wanaagsan ayaa nagu guuleysta aagga waab gaar ah in ka badan 10 sano. Sannado aad u badan, waxaan la kulannay dad badan oo wax iibsada iyada oo loo marayo Canton Fair. Waxay ii ahayd farxad inaan la kulanno laba jeer sannadkii saaxiibbada inta lagu jiro Bandhigga Canton.
Sannad kasta waxaan diyaarin doonaa naqshad cusub. Waxaan sidoo kale isku daynay inaan ku sameyno midab iyo qaab cusub walxaha dhaqameed, sida keli -keli iyo farabadan, gabbaldayaha, ubaxa, tulip, orchid, peony, iwm. qolka, qolka jiifka iyo miiska beerta. Ubaxyadeenna macmalka ah waxay ku habboon yihiin qurxinta arooska, xafladda, sannad -guurada iyo xafladda. Waxay noqon kartaa bouquet -ka gacanta, hal ama farabadan oo ku yaal weel, ama qayb ka mid ah isku -xidhnaanta qurxinta kale.
Waxaan siinnay fiiro badan oo ku saabsan midabka dhimanaya: si loo waafajiyo shuruudaha midabka ee macaamiisheena;
Si aad u samayso qaab cad: naqshad kasta waxaan u furi doonaa dhowr caaryar ilaa aan ka helno qaab qanacsan;
Si aad u samayso kartoon adag: shixnad waqti dheer ah, kartoon xoog leh ayaa aad loogu baahan yahay. Waxaan haysan doonaa ugu yaraan 5 kartoon oo lakab ah oo loogu talagalay xirxirida dibadda.
In ka badan 18 sano oo waayo -aragnimo dhoofis ah, waxaan ku kalsoonahay in badeecadayada iyo adeeggayagu ay qancin karaan baahidaada.
Waxaan la wadaageynaa guushayada lamaanayaasheena waxaanan rajeyneynaa inaan wada-shaqeyn wada-shaqeyneed la yeelanno. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa inaan noqonno lamaanahaaga la isku halleyn karo oo mas'uul ka ah guusha, waxaana rajaynaynaa in dadaalladeenna iyo adeegyadeennu ay wax ku biirin karaan horumarkaaga.